Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “One-way safar Mars: liiska ku jira toddobo Australiyaanka ah” waxaa qoray Michael Safi, ee theguardian.com on Tuesday 17 February 2015 06.18 UTC
Todoba Australiyaana ayaa ka dhigay liiska 100 musharax tartamaya safarka hal-sida in Mars ah in la dhiso gumeysi ugu horeysay caalamka oo cas ee.
Sagaal iyo toban-sano jir ah Teah, majaajilaystaha-up Josh Richards iyo geoscientist Electra Navarone ka mid ahaayeen finalka Australian ah ee One mashruuca Mars ka, kaas oo ujeedadiisu tahay in la bilaabo degaya caalamka afaraad ka qorraxda ka 2025.
Sagaal iyo toban-sano jir ah Sare Teah ayaa liiska lagu soo daray. Sawir: Mars One
Mashruucan ayaa, oo ay ku ganacsada Dutch Bad Lansdorp, ayaa sheeganaysa in ay heshay in ka badan 200,000 codsiyada ka gaysashada Martians, oo sheegtay in ay udalacday liiska in 50 ragga iyo 50 Haweenka.
Musharixiinta ayaa doortay isagoo ku salaysan "fahamka khataraha ku lug leh ay, ruux kooxda iyo rabitaankooda ah inay qayb ka duulaan tan nolol beddel u noqon,"Sida lagu sheegay hadal.
Sarkaal caafimaad oo mashruuca ayaa madax, Norbert Clark, ayaa sheegay in soo xulidda soo socda wareeg diiradda saari doono dhismaha kooxaha xooggan oo hor joogsan karin go'doon ka ah dejinta interplanetary.
"In mid ka mid ah musharixiinta shaqsi fiican aysan si toos ah aad ciyaaryahanka kooxda ugu weyn sameeyaan, sidaas darteed waxaan rajaynayaa inaan arko sida musharaxiinta horumarka iyo wada-shaqeeyaan caqabadaha soo socda,"Ayuu yiri Clark.
Goobaha lagu guul daraystay ee goobaha tababarka uu dumo. Liiska 100 musharax waa laga gooyn doonaa by bartamaha sanadka oo kaliya 24, oo waxaa loo diri doonaa Mars in kooxo ka mid ah afar kasta 26 bilood laga bilaabo 2024.
Taasi waa ujeedadu, si kastaba. Mars One saxiixay Lockheed Martin bishii December si ay u dhisaan satellite ah in lagu shubaa idiinna agagaarka Mars in 2018. Laakiin arrimo farsamo oo muhiim ah - tusaale ahaan sida loo dhul farsamo laga hago, si ammaan ah dushiisa Martian, iyo sida loo yareeyo saameynta ay shucaaca qoto dheer-bannaan oo ku astronauts - waxaa la xallin.
Mashruuca ayaa sidoo kale u baahan doonaa ugu yaraan $ 7.7bn si aad u hesho off dhulka, taas oo ujeedadeedu tahay in ay inta badan koryeelaa iibinta xayaysiinta iyo xuquuqda in a show xaqiiqada TV oo ku saabsan mashruuca. Ololaha Indiegogo An in 2013-14 aruuriyeen in ka badan $400,000. Deeqaha Total sidii of November ee la soo dhaafay bixiyay lacag ku saabsan $630,000.
Falanqaynta cilmiyeed ee madaxbanaan ayaa soo jeediyay in, liddi ku ah sheegashada Mars One ee, joogtaynta nolosha dunida korkeeda casaan loo baahan lahaa "teknoolajiyada in badan yihiin oo awood badan xaaladda ay ku sugan tahay ka".
Qorshaynayso in ay beeraan gudaha kelmedo, ka kooban boos kaabsoosha iyo deegaanka ah Galmudug, dhab ahaan u horseedi kara inay radinaya oo ah suffocating of oxygen, Cilmi baadhayaashu waxa uu sheegay, saadaalinta cirmaaxe ugu horeysay u dhiman doono ka dib 68 maalmood.
Laakiin finalka ka, oo ay ku jiraan Dianne McGrath ka Melbourne, waa ma aanay ilaayo. "Haddii dadka qabaa waxa ay noqon doontaa Mars One, ama Nasa, ama barnaamij kale qaar ka mid ah, waxaan si Mars tegi doonaa, waa ajendaha ee dayax gacmeed,"Ayay u sheegtay The Project Channel Ten ee.
"Taasi waa qayb ka mid ah ruuxa aadanaha, in la sii wado si ay u sahamiyaan. Kaliya waxaan ahay qof nasiib badan si ay qayb uga noqon. "